एक बुबा र तीनै छोरा पाइलट, एकै ककपिटमा ! – HKNepal.com – हङकङबाट सञ्चालित पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
पाइलटहरूको एउटा परिवार । शुरुमा पिता अनि तीनभाई छोरा पनि बुबालाई पछ्याउँदै पाइलट । संसारमा यस्तो संयोग पनि कमै जुर्छ होला । तेस्रो पुस्तालाई समेत सोही पेशामा लगाउने सोच छ त्यो परिवारको छ। यो पाइलट परिवारले झण्डै ६५ हजार घण्टा विमान उडाएको रेकर्ड समेत बनाएको छ । त्यही रेकर्ड बनाएको परिवारको दोस्रो पुस्ताको जेठो सदस्य हुन् सुवास रिजाल।
पाइलटहरूको एउटा परिवार । शुरुमा पिता अनि तीनभाई छोरा पनि बुबालाई पछ्याउँदै पाइलट । संसारमा यस्तो संयोग पनि कमै जुर्छ होला । तेस्रो पुस्तालाई समेत सोही पेशामा लगाउने सोच छ त्यो परिवारको छ । यो पाइलट परिवारले झण्डै ६५ हजार घण्टा विमान उडाएको रेकर्ड समेत बनाएको छ । त्यही रेकर्ड बनाएको परिवारको दोस्रो पुस्ताको जेठो सदस्य हुन् सुवास रिजाल।
अवस्था भने ठिक विपरित भएर गएको छ । आन्तरिक उडानका लागि भनेर ल्याइएका चिनियाँ जहाज घाम तापेर, बर्षा सहेर बसेको छ । भएका दुई वटा ट्वीनअटर जहाजले कुन कुन गन्तव्यमा उडान भरोस् । निजी विमान कम्पनीले धमाधम उडान भरिरहँदा निगमका जहाज भने पखेटा काटिएको चरा जस्तै रहन किन बाध्य भयो त ? सुवासको टिप्पणी छ “यो पनि सकिँदैन, त्यो पनि सकिँदैन, हुँदैन भन्ने मान्यताले निगममा घर गरेको छ । यो प्रवृत्तिलाई बदलेर, सकिन्छ, हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिए सबै कुरा सम्भव छ । हामी सम्भव बनाउन सक्छौँ ।”
सुवासको भनाइ छ, “जे हुँदैन, सम्भव छैन भनिन्छ त्यो काम सम्भव छ, गर्न सकिन्छ । निगम पनि अन्य व्यवसायिक निजी कम्पनीभन्दा अब्बल बनाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।” हुन पनि हो । काम गर्दा भन्दा नगर्दा नै फाइदा भएपछि किन मानिसले दुःख गरोस् ? अहिले निगममा भएको पनि त्यही हो । सायद यसैले हुनसक्छ उनको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति देखिन्छ बेलाबखतमा ।
सुवास र श्रवण अनुभवी पाइलटका रुपमा स्थापित छन् । दाजुभाई नै एकै पटक ककपिटमा रहँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ त ? “अरुजस्तै सामान्य” सुवासको छोटो उत्तर थियो । झण्डै अढाई सय हाराहारी उडानमा दाजुभाइ सँगै हुन्छन् । प्रायः एकैसाथ उडेका छौँ । दाजुसँगै एउटै ककपिटमा धेरै उडान भरेका सुदीपले भने बुबासँग जहाज उडाउन पाएको अनुभव छैन ।
उनलाई बेला बेलामा मलाई त्यो सौभाग्य भने मिलेन भन्ने लाग्दछ । एउटै ककपिटमा रहँदा दाजुभाइको नाता कि एउटा व्यवसायिक पाइलटको सम्बन्ध ? कुन बढी देखिन्छ ? हाम्रो अर्को जिज्ञासा थियो सुवाससँग । उनले भने, “दाजुभाई भन्दा पनि साथी जस्तो लाग्छ मलाई । उडेपछि हामी साथीभाइ ।” श्रवणको पनि उस्तै भनाइ छ “ककपिटमा बस्दा दाजुभाइ भन्ने जस्तो नै हुँदैन ।”
नयाँ सोचका साथ काम गर्नैपर्छ । निजी सेवा प्रदायकले गर्न सक्छ भने निगमले किन गर्न सक्दैन ? तपाईले जिम्मेवारी पाए निगमलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ? हाम्रो यो प्रश्नको उत्तरमा सुवास धेरै आशावादी देखिए । भने, “निगमलाई धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । छ महिनामा परिणाम दिन सकिन्छ । निगम भित्रका तमाम विकृति पनि हटाउन सकिन्छ । दर्जन बढी जहाज पनि किन्न सकिन्छ । गन्तव्य पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । नसकिने भन्ने केही पनि छैन । सबै सम्भव छ । गर्न सकिन्छ ।”
Tags: उडान, ककपिट, पाइलट, विमान
हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज पनि लोकल केस जिरो, २ आयातित थपिए…
एनआरएनएद्वारा जुम्ल्याहा बच्चासहित अलपत्र परेकी आमाको यूएईबाट उद्धार